Desktop desktop-ka ugufiican: Oktoobar 2013 - Natiijooyinka | Laga soo bilaabo Linux
Waqtigu waa inuu kaqeybqaataa tartankeena bisha. Runtii waxay ahayd mid aad u adag in la go’aansado maxaa yeelay waxay noo soo direen shaashad aad u fiican oo ka mid ah miisaskooda.
Si kastaba ha noqotee, waqti dheer ka dib, waxaan ugu dambeyntii awooday inaan doorto waxa aniga ii ah 10 miisaska ugu fiican. Waxaa jira kala duwanaansho aad u xiiso badan oo ah distros, deegaanno, astaamo, iwm. Si aad wax u barato, ugu dayato uguna raaxeyso! Miyaad liiskaaga ku jiri doontaa?
1 1. Boris Dimael Vasquez
2 2. Jorge Dangelo
3 3. Bisadda Skate
4 4. Arshe Gharsia
5 5. Rodrigo Moya
7 7. Adolfo Rojas
8 8. José Luis Viéitez
9 9. Gonzalo Rau
1. Boris Dimael Vasquez
Distro: Dugsiga Hoose
Deegaanka: Gnome (Pantheon Shell)
Mowduuca: Mawduuca Blue Elementary
Astaamaha: Astaamaha Buluugga Hoose
Gundhig: Delete Wallpaper Elementary.
Wax ka beddelka: Conky, Wingpanel, iyo kuwa kale oo aanan xasuusnayn: p
2. Jorge Dangelo
3. Bisadda Skate
Astaamaha: Nurix utouch
4. Arshe Gharsia
Manjaro, MediterraneanTribute, sanduuq, Nitrux Icons, Play Font, Gold & Gray Conky, QaahiraDock
5. Rodrigo Moya
Crunchbang 11 Waldorf, conky, ipager, adeskbar (dock) iyo tint2
dugsiga hoose Os Luna
Astaamaha: Pacifica (http://bit.ly/1fh3hF7)
7. Adolfo Rojas
Distro: Ubuntu 13.04 - 64 jajab
Maamulaha daaqada Unity (wax laga beddelay)
Iyadoo Caido-Dock (wax laga beddelay), Maamulaha Conky - Conky LSD
Mawduuca Windows: Delorean-Dark 3,8
Mawduuca Icon: Baraf-Saber-madow
Nooca (wax laga beddelay)
Waraaq: Waraaqaha Kalinimada
8. José Luis Viéitez
Dulucda: NovaShell + Numix
Warqadda gidaarka: Rozne
9. Gonzalo Rau
Astaamaha: Dugsiga Hoose
OS> Manjaro 0.8.7.1
mawduuca Gtk> default
Conky> Wax laga beddelay Gotham, Cimilo-fidsan
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Desktop-ka Linuxero ee ugufiican: Oktoobar 2013 - Natiijooyin
75 faallooyin, ka tag taada
Dhammaantood waa kuwo aad u fiican, kuwa aan ugu jeclahayna waa kuwa ay yihiin Rodrigo Moya iyo José Luis Viéitez, in kastoo dhammaantood ay aad u fiican yihiin.
@ José Luis Viéitez, waxaan raadiyey darbiga magac ahaan laakiin ma helin, hadii aan la wadaagi karo waxay noqon laheyd wax cajiib ah!
Shaki la'aan, dugsiga hoose wuxuu leeyahay muuqaal xarrago leh… sida dhifka ah dhammaan GTK
wixii ku dhacay KDE sidoo kale waa wax la isku haleyn karo oo la qurxin karo ...
Jose Luis Vieitez (@jacayl) dijo
Salaan sidee tahay
Waxaan ku helay gidaarka gidaarka gidaarka.cc
Waa tan Link: http://wallbase.cc/wallpaper/2373631
Jawaab Jose Luis Vieitez (@jlvdesign)
Aad baad ugu mahadsantahay wadaagistaada !! miiskaaga oo aad u wanaagsan ...
Waxaan jeclaa # 5, Rodrigo Moya's .. 😉
Waxay i xasuusinaysaa Chrome OS.
Rodrigo M. dijo
runtii, waxaa dhiirrigeliya ChromeOS. Tint2 bar icon oo aan ka helay xda-developers oo waxay u shaqaysaa sidii badhanka bilowga, oo loo qaabeeyey sida loo sameeyo saaxiibkii buskudka la daabacay bil ka hor, halkan DesdeLinux.
Jawaab Rodrigo M
Aad baad u mahadsantahay, gacaliye! Openbox waa seeeexy!
Waa wax fiican! feker ahaanteyda waxay aheyd # 1.
Waxaan u maleynayaa in Kde aysan aheyn midka aad jeceshahay ..: /
Ma waxaad u leedahay sababtoo ah ma jiraan wax KDE ah? Malaha O_O ma jirin
Waan jeclahay KDE, laakiin haddii ay jiraan wax had iyo jeer igu dhibaya oo ku saabsan desktop-kan, waa dhib ku habboonaynta. On desktops-yada 'GTK' way ka fududahay (aniga uguyaraan) waxaana jira mowduucyo iyo astaamo kaladuwan oo badan.
Jawaab Dhiig ku daatay
Saas ma aha waxaan u maleynayaa inay tahay tan kale, kde aad ayey u fududahay in la habeeyo
Ku jawaab LOL
naa malaha waa moodo, cunno macaan badan oo leh XFCE iyo hoose sifiican, dadku way u codeeyaan taas
Maxay dadka farshaxanku leeyihiin… dhammaantood waa qaali. Iyo tan ugu naxdinta badan ayaa ah inaysan jirin xitaa KDE O_O
Taasi waa sax ... bishaan waxaa aad u yaraa qabashada KDE ... oo wax cod ah kama aysan helin ama kuma darin sharaxaad faahfaahsan oo ku filan.
Aad ayey ufiican yihiin laakiin jilaaga weyn ayaa la waayey, KDE, fekerkeyga sharafta leh salaan.
Dhibaatooyinka adag dijo
Waa xiiso leh in la arko isbeddelka cusub ee baarka hoose iyo kor u kaca weyn ee dugsiga hoose .. aad iyo aad u wanaagsan dhammaantood
Taasi waa sax… waxaa jiray waxbadan Elementary markan… waxay u badan tahay inay xiriir la leedahay sii deynta Luna ee dhowaan.
@Elav ma ka qaybqaadan karaa «Dugsiga Hoose KDE»? Runtu waxay tahay in KDE-gaaga caadada kuu ah ee aad sameysay maalin dhaweyd u eg eOS oo runtii u ekaaday eOS.
Eeg haddii aan taas ku sameyn karo Debian Wheezy iyo KDE 4.8.4, laakiin halkii calaamadda eOS, waxaan dul dhigi doonaa astaanta Debian.
Waan jeclaaday 5ta !! abid ugu fiican…
Ku jawaab Facelees
Aad ayey u xun tahay ma ogi waxa ku saabsan tartankan waqtiguu doono ha ahaadee halkan waxaan kaga tagayaa miiskeyga Debian https://plus.google.com/u/0/
halkan waxaan uga tagayaa url sax ah =)
Macno malahan, waxaan maskaxda ku haynaa bisha soo socota. 🙂
Ma rumaysan karo, waxaan ku sii jiray kala-saarista. Meel tobnaad sharaf leh 😉
Jawaab Rodrigo Moreno
Taasi waa sax ... habka, taada ayaa ka mid ah kuwa aan ugu jeclahay. 🙂
Miiska kaliya ee aan ka helay waa kaa, kuwa kale waxay rabeen inay u ekaadaan mac ... Salaan
Muxuu yahay sawirkaaga derbiga ah ???
Iyo inaan ka fikiro inaan dhawaan qaabeeyay Netrunner-kayga gaarka ah, waxaan ahaan lahaa wakiilka KDE ee tartankan ...
Oops, waxaan ku jiray 7
laakiin hey, waxaa jira miisas kale oo aad u fiican ...
Waxaan qabaa in la horumarin karo 😉
Jawaab Adolfo Rojas
Lambarka 5aad waa qurux badan yahay, in kastoo aan jeclahay Lambar 2 sidoo kale, waad ku mahadsan tahay wadaagga miisaskaaga. Salaan.
Labadaba tii 5aad. sida 10aad. miiska weyn. Runtu waxay tahay inay runti sifiican uqabteen.
Waxyaabaha qosolka badan ayaa ah in kumbuyuutarkaygu yahay desktop, halkanna wuxuu ku soo baxayaa isagoo ah MAC.
In ka badan sida Mac, sida Lenovo Ideapad. Ha ha…
Marka xigta, Lenovo ThinkPad. Maanta waxaa i hareeyay qaab aad u badan oo ah qaabka Apple / Braun oo aan go'aansaday inaan doorbido isticmaalka kombuyuutarkayga.
Buugga MDN dijo
Maya. 5 waa wax layaableh, oo hadaan u xiisay kde u_u, shixnadda soo socota ee soo socota
Jawaab Manuel MDN
Haa, KDE waxbadan ayaa maqnaa ... waxaa jiray qabqabasho aad uyar oo deegaankaas laguhayo ... kamana mid ahayn kuwa ugu cod badan, nasiib daro. : S
Kaalinta 8aad! =)
Runtii ma aanan fileynin… dhowr maalmood waxaan arkay miisas aad u wanaagsan oo aad u wanaagsan! Ha moodin inaad 10-ka sare ku jirto!
PS: Muddo kahor waxaan kajawaabay Warqadda uu @IbanBarra weydiiyay laakiin ma aqaano waxa ku dhacay faallooyinkaas ...
Halkan waxaan mar kale uga tagayaa xiriirka: http://wallbase.cc/wallpaper/2373631
Waxaan rajeynayaa inuusan wax jabineynin.
Boris Vasquez dijo
Goobta Koowaad: O, aad baad ugu mahadsantahay tixgelinta iisoo qaadaysa desktop-ka. Waan sii wadi doonaa inaan la wadaago wax ka beddelka eOS-kayga si uusan uga tagin 10-ka sare. Aad baad ugu mahadsantahay tan 1aad. Meel 🙂
Jawaab Boris Vásquez
Taasi waa sax, Boris ulations hambalyo!
Waa wax la yaab leh waxa dadka qaar ku sameeyaan miiskooda (Jorge Dangelo's, 2, iyo Gato Skate's, 3, waa wax fudud). Waxaan marwalba ku fikiri jiray in maalinta aan haysto shaashad ka weyn 15 ″ Waxaan heli doonaa meel la mid ah kuwa shaashadda ku jira. Dhammaantood aad ayey iila muuqdaan.
Waxaa laga yaabaa in bisha soo socota aan isku dayo wax kayga, inkasta oo aan u waayey farshaxan dabiici ah waxyaabahan XDD
Miyey lagama maarmaan noqotay in sawir Macbook ah lagu daro dhammaan tusaalooyinka?
Miyaanay noqon karin Acer, Toshiba, Dell, iwm, oo ah wax sifiican ugu socda barnaamijka bilaashka ah?
Ugu jawaab gabo
Aaway tufaaxii oo aanan arki karin? xDDD Waxay sifiican u noqon kartaa HP EliteBook, ama sifiican tan:
Xaqiiqdii, haddii ay tahay Mac, oo aan lahayn astaanta hore (madow xagga hoose ee shaashadda), waa la ogyahay sababta oo ah waxay leedahay qaataha infrared-ka ee ku jira meesha iyo qaabka, sida Mac (laga bilaabo 2010 ama waqtigaas) .
Uff, oo waxaad u timid inaad arrin ku raaxaysatid. XDD
Sikastaba ha noqotee, dhib malahan sheygu wuxuu yahay (Linus Torvalds mid buu leeyahay), waxa muhiimka ah waa waxa gudaha kujira. 😉
Dhab ahaan, maxaa intaa ka sii badan, waxay ila tahay aniga kuwa caban kara inay yihiin kuwa mac, maadaama ay tahay nidaamkooda lagu badalay mid ka wanaagsan.
Mid ka mid ah qorayaasha ugu wanaagsan ee aan arkay waxaa iska leh José Luis Viéitez .. Hambalyo 😀
Sida qaabka dugsiga hoose u garaacayo si adag.
Anigu ma dhajiyo tayda maxaa yeelay waan guuleystaa.
Miisaska aad u fiican.
Iyo haa, waa wax lala yaabo inaadan arag qaar leh KDE.
Jorge Dangelo dijo
Waad ku mahadsantahay dooqaaga midkeyga 10-ka, mahadnaq badan oo qabashooyin ah oo ay wadaagaan Aynu isticmaalno G + Linux waxaan awooday inaan dhowr waxyaalood ka helo.
Aad ayaan u fiicanahay dhammaan kuwa la doortay laakiin waxaan jeclahay Rodrigo's crunchbang. Salaan.
Jawaab Jorge Dangelo
Adigana sidoo kale waa cajiib, Jorge. Si aad u badan ayay taasi iga dhigeysaa inaan doonayo inaan ka tago CB-ga oo aan u gudbo dhinaca Manjaro. Qorfaha wax badan buu cunaa? ... ama haddii kale laga yaabee inay la socoto XFCE. Waxaan isku dayay inaan rakibo hal jeer laakiin waxaan helay wax aan ka ahayn argagaxa kernel, waxaan weydiistay caawinaad goobaha laakiin xitaa Phillip Müller ima caawin karo arinta (waqtigaas 0.8.3). Waxay noqon doontaa waqtigii la siin lahaa fursad kale oo aan filayo ... lol. Qabsoon!
Jorge D. dijo
Qorfe waxay ku cunaysaa 600mb, ma garanayo inay wax badan tahay ama wax yar tahay, waxaan haystaa 8gb wan oo wan: p oo leh cusboonaysiintii ugu dambeysay ee manjaro isticmaalka ayaa yaraaday. Hadaad rabto inaad manjaro siiso fursad kale, soo dhawow. Salaan.
Jawaab Jorge D.
Tag laakiin waxa JACAYL ah baarka sare iyo docky-ka hoose….
Mar kasta oo aan arko miis sidan oo kale ah maskaxdaydu kama joogsan karto ka fikirka MACs
Aragtidayda kan ugu fiican ayaa u muuqda midka ugu dambeeya ee Manjaro… waa fikrad ka duwan shirkada Cupertino de Mountais Vew
sideen ugu rakibikaraa macmacaankaas miiska desktop manjaro 10?
caadadu way yar tahay, ama waxay odhan lahaayeen waxaa jira; dareen leh
LOL! Uma maleyneynin in sawirka shaashadeyda (# 5) uu galayo tartanka bishaan tan iyo markii aan qabtay dhammaadka Sebtember, in kasta oo ay weli tahay desktop-kayga rasmiga ah. Xayawaan aad u fiican bishan Pablito, dhammaantood waan jeclahay ... in kastoo ay jiraan qaar kde ah oo la la'yahay. Habsiinta goolka!
Haa, waxaan u qaatay qaar ka mid ah Sebtembar saldhigna sidoo kale (Waxaan u maleynayaa in taada ay aheyd tan kaliya ee ka mid aheyd 10-ka ugu dambeeya) maxaa yeelay bishii hore ma aanan sameynin tartankan ... 🙂
Walter Rodriguez dijo
Dhammaantood aad ayey u fiican yihiin, laakiin tan aan ugu jeclahay waa tayda 😛 (Xitaa haddii aan kaliya jeclahay)
Jawaab Walter Rodriguez
Laptop-yadaasi waxay umuuqdaan mac hahaha, miisaska waa fiicanyihiin, kuwa shaqsiyadeedna waa kuwa xfce. Farxad !.
Kaliya ma isticmaalaa MATE? : AMA
Ku jawaab matizak
Ma jiraan wax aan sameeyo tayda, waa wax cajiib ah…… Waa hagaag malaha waqtiga soo socda.
Ayaa kuu sheega ... malaha marka xigta. 🙂
Qurux ahaan waan jecelahay iyaga laakiin aniga ahaan, haysashada qaanadda albaabka ee booska sare waxay u taagan tahay luminta wax soo saar.
Waxaan doorbidayaa in baarku ku haysto booska hoose xitaa haduu "caajis" yahay.
hoosta murankee? Waxaan ugu isticmaalaa liiska caalamiga ah waxayna keydisaa booska toosan, oo aan weligayba uga mahad naqo
Sababtoo ah waxaan hayaa hawl loo qoondeeyey gees kasta oo shaashadda ah iyo xadka kani wuxuu ii oggolaanayaa inaan si dhakhso leh u isticmaalo iyaga oo aan si sax ah u riixin aag yar.
Tusaale ahaan, si aan u xiro codsi waxaan si fudud ugu wareejiyaa tilmaamaha xadka midigta sare oo guji, waan sameyn karaa xitaa aniga oo aan fiirin. Dhinaca kale, haddii aad guddi ka heli lahayd xagga sare, waa inaad gujisaa "x" si hufan maxaa yeelay mar dambe ma heli doontid caawinta cirifka shaashadda inaad sidaas sameyso.
Waxay u muuqan kartaa doqon laakiin waxaan ula qabsaday la shaqeynta sidan oo kale.
Dhadhan aad u fiican, minimalism saafi ah.
Inaad barato oo ku daydo,
Boostada ugu wanaagsan!
Ku jawaab huachimingox
Waa hagaag, taydu waxay buuxisaa shuruudaha in ka badan dhowr ka mid ah kuwa jira (labadaba "+1" iyo sahlanaanta "nuqul")
Waa wax lagu qoslo - ma dhahayo waa wax taban ama togan, kaliya xiiso leh - in aysan jirin wax KDE ah oo ka mid ah tobanka.
Ku jawaab tusfo
In ay aad u yaraayeen qabashada kde bishaan, bilooyinkii hore kde ayaa ka adkaaday kuwa la doortay kuwa kale, waxaan u maleynayaa inay iska timid.
u codee 5 iyo 10.
Rodrigo M., Waa maxay magaca dejinta astaamaha aad isticmaasho?
Ku jawaab Trooper
Uma arko wax gaar ah midka koowaad, kaliya dalabka maqaarka fiican ...
Aniga guuleystaha wuxuu udhaxeyn doonaa 5 iyo 8
Maaddaama Linux IRC ay si ku meelgaar ah ugu guureyso FreeNode
II Qaybinta qayb ahaan abaalmarinta Bitácoras 2013